Asus ROG ekwentị 5 gosipụtara na Geekbench na Snapdragon 888 | Gam akporosis
Asus ROG ekwentị 5 bụ mobile egwuregwu na-esote nke ika ahụ, ọ na-abịa na Snapdragon 888 na 16 GB nke RAM
Asus bụ otu n'ime ndị ama ama ama ama ama na ụlọ ọrụ egwuregwu. Companylọ ọrụ ahụ enwupụtala na mpaghara a site na iji mobiles na-aga nke ọma dị ka usoro ROG ekwentị, nke pụtara na ha bụ ndị na-enye arụmọrụ kacha mma n'ihi na ha kwadebere chipsets Qualcomm kachasị ọhụrụ na nke kachasị ike, wee jiri ọtụtụ njikarịcha na ọrụ maka egwu egwu, yana yana mmiri mmiri / ngwakọ jụrụ atụmatụ na ndị ọzọ.
El Ekwentị Asus ROG 5 Ọ ga-abụ esemokwu egwuregwu na-esote ịbịa site na ika ahụ. Ma ọ bụ na n'ikpeazụ, ngwaọrụ ahụ apụtawo na ndepụta Geekbench, na-ekpughe ụfọdụ nkọwa teknụzụ ya.
Nke a bụ ihe Geekbench kwuru banyere Asus ROG Ekwentị 5
Dika ihe akara aka gosiputara na ohuru nke Asus ROG Phone 5, onu ogugu egwu egwu na-abia na ikpo okwu asatọ nke nwere oke elekere nke 1.8 GHz nke na-egosi na o bu Qualcomm Snapdragon 888, ihe nhazi chipset maka njedebe dị elu nke 2021.
Benchmark kwukwara na smartphone na-abịa na ebe nchekwa RAM nke ikike 16 GB, nke ga-abụ nke ụdị LPDDR5. Ọ bụ ezie na ekwuru na ọ bụ 14.90 GB, a na-achịkọta ọnụ ọgụgụ a na 16 GB ekwuru na mbụ.
Ihe nlere anya na-ekwukwa banyere sistemụ arụmọrụ nke a na-anwale ngwaọrụ na ikpo okwu, mana nke a abụghị ikpe. Otú ọ dị, anyị maara nke ahụ ekwentị ga-abata na gam akporo 11.
N'ikpeazụ, ọnụ ọgụgụ ule a na-ahụkarị bịara na 1.125 isi, ebe nsonaazụ ọtụtụ isi gbara gburugburu ihe 3.714. Okwesiri ighota na onu ogugu ndi a bu ihe ntughari aka na ihe nlere anya, ya mere Asus ROG Ekwenti 5 gha enwe otutu akara (ikekwe di elu) ozugbo ebido ya na ahia, nke amaghi mgbe oga adi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Asus ROG ekwentị 5 bụ mobile egwuregwu na-esote nke ika ahụ, ọ na-abịa na Snapdragon 888 na 16 GB nke RAM
Foto Google na - enye gị ohere ime ka vidiyo ndị ahụ bukwuo ibu site na-atụtu na ihuenyo